Guji Hareeraha | ThatsLuck.com
Sharadka deriska on roulette
Guji agagaarka waa software cusub oo roulette ah oo ka yimaada codsiyada isticmaalayaasha qaarkood, oo horeyba u isticmaalay barnaamijka software Roulette Turbo Clicker, Waxay i weydiisteen inaan sidoo kale abuuro barnaamij lagu sharaddeeyo lambar lagu daray dhiniciisa, oo sidoo kale loo yaqaan "deriska".
Sidaa darteed "derisyadu" waa lambarada u dhow dhinaca midig iyo bidix ee "saldhig" lambar aan dooneyno inaan sharad dhigno.
Tusaale ahaan, haddii aan rabno inaan sharad ku dhigno eber iyo nambaradeeda 2 ee "deriska ah", waa inaan ku sharadno lambarrada 26-0-32, wadar ahaan 3 lambar.
Sharad ku dhigista nambarrada dhow aad ayey faa'iido u tahay kuwa doorbidaya ciyaarta qaybaha kala-sooca, inta badan dhab ahaantii laacibku wuxuu u baahan yahay inuu daboolo wax badan ama ka yar oo ka mid ah roulette-ka iyo mahad Guji Hareeraha hadda suurtagalnimadani waa mid qof walba gaari karo.
Sida loo habeeyo Guji Hareeraha
Guji Hareeraha waa wax aad u fudud in la isticmaalo, waa ku filan tahay in la bilaabo ka dib markaad gasho lambarka shaqeynta, u tag qaabeynta ugu horeysa ee miiska ciyaarta, xulashooyinka run ahaantii aad ugu eg kuwa loo bixiyay for Roulette Turbo Clicker.
Sidoo kale leh Guji Hareeraha Xaqiiqdii, kaliya awood u yeelo ikhtiyaarka "Spacebar Config" si aad si toos ah u gasho isku-duwaha lambarrada roogga, hawlgal celcelis ahaan qaata wax ka yar hal daqiiqo.
Markaad gasho dhammaan iskudhafka X / Y ee lambarrada waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ku keydiso qaabeynta badhanka ku habboon waxaanan diyaar u noqon doonnaa inaan isku dayno barnaamijka roulette Guji Hareeraha miiska cagaaran.
Sidoo kale leh Guji Hareeraha waxaa jira ikhtiyaarro guji suurto gal ah premium o ka dib khamaarista, iyo sidoo kale waxaad dejin kartaa xawaaraha qasabadaha adoo hagaajinaya ikhtiyaarka Mouse Guji Xawaare marka la doono, iyada oo maanka lagu hayo in 0 ay tahay xawaaraha ugu badan iyo in 1000 u dhiganta 1 ilbiriqsi oo u dhexeeya qasabadaha.
Sharad ku dhigista Roulette-ka ee guji hareeraha
Markaad dhammaystirto nidaamkan fudud (► YouTube sida iska cad waxaad ka heli doontaa bandhig muuqaal ah), waxaad riixi kartaa badhanka Orod Clicker, si aad ugu gudubto dhagta saxda ah.
Halkan ma jiraan waxyaabo badan oo lagu sharxo, kaliya guji guji meesha aad jeceshahay shaashadda, dhanka bidix ee kore waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarka Dariska, mahadsanid taas oo aad ku dooran karto imisa "deris" ah oo aad ku sharxi karto marka lagu daro lambarka aasaasiga ah, haddii xaqiiqda aad rabto inaad sharad ku dhigto lambarka 5 iyo labadiisa dhinac, taasi waa, wadar ahaan 5 lambar, kaliya dooro 2 ee Deriska sanduuqa oo guji wareegga cagaaran ee u dhigma 5.
Xaaladdan oo kale, wadarta 5 lambar ayaa sharad lagu gelayaa, taasi waa lambarka aasaasiga oo lagu daray labada deris ee midigtiisa iyo 2da deris ee bidixdiisa.
Xagga sare ee midigta waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarka Halbeegyada, taasi waa inta unug ee sharad lagu dhigaayo nambar kasta.
Waxaan dhihi lahaa ma jiraan wax kale oo lagu daro, tani waa mid ka mid ah barnaamijyada caadiga ah ee sameeya waajibaadkooda iyada oo aan la helin dhibaatooyin badan oo taas oo si cad u noqotey mid aan la beddeli karin kuwa dejiya istiraatiijiyad sharad ku saleysan qaybaha roulette.
Guji Hareeraha waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku sharraxdo ugu badnaan lambarka aasaasiga ah iyo 18 dhinac bidix ah iyo 18 midigta, sidaas darteed waxay sidoo kale dabooleysaa wareegga wareegga wareega.
Ku raaxeyso oo ha ilaawin inaad iska qorto kanaalka Telegram haddii aad rabto inaad hormariso wararka oo dhan ama aad hesho gunno gaar ah oo loogu talagalay xubnaha.
Soo Degso Fayl	CAround.zip - 2 MB